Cabbiraadda Hawlgelinta Macaamiisha Waqti-Dheer iyadoo loo marayo Falanqaynta Habdhaqanka Codka | Martech Zone
Jimco, Nofeembar 20, 2015 Douglas Karr
Kaliya waxaan wax ka qornay Muhiimadda waqtiyada jawaabta iyo fursada iibkaaga ama kooxda adeegga macaamiisha si ay uga jawaabaan… waxayna ka wada hadleen tayada jawaabtooda sidoo kale. Kawaran haddii aad dhab ahaantii cabiri lahayd saameynta wadahadalka aad la leedahay macaamiishaada? Waa macquul iyadoo Wadahadal Cogito.
Wadahadalka Cogito wuxuu hagaajiyaa waxqabadka wakiilka adeegga macaamiisha isagoo u soo bandhigaya hagitaan habdhaqan-waqtiga dhabta ah. Dhibcaha Ka Qaybqaadashada Cogito wuxuu siiyaa ujeedo la isku halleyn karo oo tayo leh 100% is-dhexgalka taleefannada la xushay ee shirkaddu la leedahay macaamiisheeda.
Qiyaas inaad awoodo inaad dareento jahwareer ama qanacsanaanta waqtiga-dhabta ah markaad lahadleyso rajo ama macaamil! Tani waa ballanqaadkii habdhaqanka Analytics sida Cogito. Dabeecadda Cogito Analytics teknolojiyaddu waxay ka timid cilmi baarista iyada oo loo marayo MIT Media Lab waxaana lagu caddeeyey inay wax ku ool yihiin iyada oo loo marayo tiro ganacsi oo la geeyay.
Codka Aadanaha - Xog weyn Analytics lagu dabaqay algorithms lahaansho awood siinta falanqaynta qulqulka calaamadaha codka
Real-Time - Khibrad saaxiibtinimo leh oo ku hagta wakiilka inuu si firfircoon ula qabsado qaabkooda si uu ula jaanqaado macaamilka doorbidkiisa
Dhibcaha - Dhibcaha Ka-Qaybgalka Cogito ™ waxay siisaa maamulka qiyaasta ujeeddada cad ee waxqabadka wakiilka iyo ku-guuleysiga is-dhexgalka
Saadaalin - Aragtida laga soo qaatay isdhexgal kasta waxay ku wargelinaysaa macmiil kasta iyo wakiil kasta oo ay u badan tahay inay sameeyaan xiga
Natiijooyinka - Daruuro ku saleysan, dareen leh in la isticmaalo iyo isdhexgalka bilaa cilladaysan ee jira CRM iyo nidaamyada taleefanka ayaa dardargeliya waqtiga qiimaha
Cogito waxay siisaa hagista waqtiga-dhabta ah habdhaqanka wakiilada adeega macaamiisha, iyaga oo awood u siinaya inay hagaajiyaan qaabkooda wada xiriirka, iyagoo dhisaya xiriir kalsooni badan leh macaamiishooda. Barnaamijka 'Cogito' wuxuu ku siiyaa aragti deg deg ah oo ujeeddo leh heerarka macaamiisha ee hawlgelinta is dhexgal kasta oo taleefan ku saleysan. Tani waxay awood u siineysaa xirfadleyda taleefannada inay soo gudbiyaan khibrad macaamiil oo aad u xiiso badan, taas oo ugu dambeyntii hagaajinaysa tayada adeegga iyo waxqabadka iibka.
Tags: dhaqankafalanqaynta akhlaaqdacogitowada hadalka cogitoAdeegga macaamiishacodfalanqaynta codkacodkafalanqaynta codka
Faylka: Nadiifi Faahfaahintaada Video iyo Habka Dib u Eegista